စာကြည့် တိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » စာကြည့် တိုက်	15
Posted by တောတွင်းပျော် on Jul 3, 2016 in Creative Writing | 15 comments
တိုက်ခဲ့ မိဖူးတဲ့ ခလုတ်လေးတစ်ခု
တောတွင်းပျော် ငယ်ငယ်က အိမ်ခြေသိပ်မများလှတဲ့အထက်ကျောင်း တစ်ကျောင်းတည်းသာရှိတဲ့ 
တောင်ပေါ်မြို့ ကလေးမှာ နေခဲ့ ရတယ်။ ကစားဖော်ဆိုတာက လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရတဲ့ 
၆/၇ ယောက်လောက်သာ။ ဒီအုပ်စုတွေက အသက်အရွယ်စုံ အတန်းကြီးအတန်းငယ်တွေ။
မတည့်လည်း ဒီအုပ်စု တည့် လည်းဒီအုပ်စု။ ဒီ့ အပြင် တခြားလူတွေကမှ မရှိတာပဲ။
သူငယ်ချင်း အများစုက ပညာရေးဝန်ထမ်းသားသမီးတွေ။
အဆော့ ကလည်းသန်ပါ့ ။ စနေ တနင်္ဂနွေ ကျောင်းပိတ်ရက်များဆို တနေကုန် တနေခန်း။
သူငယ်ချင်းအဖေကျောင်းအုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြူးတင်းပေါက်က ကြိမ်တုတ်နဲ့ကိုယ်ယောင်ပြမှ နားလိုက်ကြတာ။ ဒါတောင် မိုးစုံးစုံးချုပ် မမြင်မကန်းတဲ့ အထိ ဘောလုံးကန်လို့ကောင်းနေကြတုန်းကိုး။
ဆရာကြီးရဲ့ကြိမ်လုံးကလည်း ဟန်ပြကိုင်ထားတာမဟုတ်။ သူ့ သားတွေ လူပျိုသော ကလေးသော ခွဲခြားတာမဟုတ်။ ပြစ်ဒဏ်အလိုက် ကြိမ်ဒဏ်သတ်မှတ်ချက်ကရှိပြီးသား ..
ဥပမာ ညနေတိုင်းအလှည့် ကျ ရေလောင်းပေးနေရတဲ့ခြံခင်းတွေ တာဝန်မကြေလို့ ကတော့ 
ဒီကောင်တွေကို ကြိမ်တုတ်တွေနဲ့မအုပ်ရင်လည်း သူတို့ ဇတွေကလည်း မသေး။ ဒီတုန်းက
တောတွင်းပျော်တို့ က ၄ တန်းကျောင်းသားတွေသာရှိသေးတယ်။ Video တွေက တောတွင်းပျော်တို့ 
နေတဲ့တောင်ပေါ်မြို့ ကလေးဆီ ပေါက်လာကာစ။
ဟောင်ကောင်ဂျက်မတို့ဂျက်ကီချန်းတို့စတဲ့အက်ရှင်ကားတွေ ခေတ်စားနေချိန်။
တစ်နေ့ တော့တောတွင်းပျော်ရဲ့သူငယ်ချင်း ဆရာကြီးသားက သူကြည့် တဲ့Rolling Fire
ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကို အရမ်းသဘောကျနေပြီး ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေတယ်။
သူပြောပြီး သိပ်မကြာလှတဲ့ညနေတစ်ခုမှာ ဒီကောင့် ကို ဆေးရုံပို့ လိုက်ရတယ်။
ဖြစ်ပုံက အဲဒီထဲက မင်းသားကိုအားကျပြီး ပုဆိုးနှစ်စကို ခါးချည် ကျန်နှစ်ကို နောက်လှန်ပြီးခေါင်းပေါ်
ကအုပ်ကိုင်ပြီး ၁၆ပေ လောက်အမြင့် ရှိတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးတံမြိတ်စွန်းကနေ လေထီးတပ်သားကွလို့ 
ကြုံးဝါးပြီး ခုန်ချလိုက်တယ်ဆိုလား …
ဆေးရုံက သူ့ ဆီကိုလိုက်သွားတော့ငါ့ လေထီးက သေးနေလို့ဒီလိုကျတာတဲ့ ။ ခြေထောက်မှာကတော့ပတ်တီးအပြည့် နဲ့ ။ သူက တောတွင်းပျော်တို့ ထက် အသက် ၂ နှစ် ကြီးပြီး ၆တန်း
သူတို့ညီအစ်ကိုတွေက ၄ တန်းအရွယ်လောက်ကတည်းက ပုဆိုးပြဲတွေ ဘာတွေကို ကိုယ့် ဘာသာ
အပ်ချုပ်စက်နဲ့ကောင်းကောင်းချုပ်တတ်နေကြပြီ။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကျောင်းအုပ်ကြီးလစာနဲ့ညီအကိုမောင်နှမများတဲ့သူတို့ အတွက် ကျောင်းစာရိတ်တွေ
မလောက်ငှတော့နွေကျောင်းပိတ်ချိန် ဖားကန့်မိုင်းရှူးတွေသွားကျောက်တူးပြီးငွေရှာပြီး တက္ကသိုလ်
ကျောင်းပြီးတဲ့ အထိ သူ့ တို့ ဘာသာတက်သွားကြတယ်။
လေထီးတပ်သားသူငယ်ချင်းကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီး GTI ဝင်ဖြေ ကျောင်းပြီးတော့ 
အွန်လိုင်းကနေ သူ့ ဘာသာ စပွန်ဆာရှာ။ ယူအက်စ်က စပွန်ဆာရတော့ထွက်သွားပြီး အလုပ်တဖက်နဲ့ကျောင်းတက်နေရင်းက ဒီမှာကျန်ခဲ့ တဲ့ညီ ညီမတွေတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ယူအက်စ်ကို ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ တယ်။
တောတွင်းပျော် စာကြည့် တိုက်အကြောင်းရေးမယ် ကြံရာက စာကြည့် တိုက်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်အမှတ်ရလာတာမို့သူတို့ အကြောင်းတွေ မဆီမဆိုင်ရေးမိတာပါ။
အဲဒီ့ အချိန်တုန်းကဆိုရင် ကျောင်းဖွင့် ကာလ စနေ တနင်္ဂနွေ ရက်တွေ
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို နေ့ ခင်းဖက်ဆို တောတွင်းပျော်တို့ အုပ်စုက စာကြည့် တိုက်ထဲ
အမြဲရောက်တယ်။ ဘယ်လိုရောက်နိုင်သလဲဆို စာကြည့် တိုက်မှူးက တောတွင်းပျော်အုပ်စုက တစ်ယောက်ရဲ့အဖေ ကျောင်းဆရာ။ သူကစာကြည့် တိုက်မှူးတင်မကဘူး ကျောင်းရဲ့ အား/ကာမှူးလည်း
တောတွင်းကျော်တို့အုပ်စုက စာကြည့် တိုက်သော့ တောင်းရင် အချိန်မရွေး သူထုတ်ပေးတယ်။
ဒီတုန်းက တောတွင်းပျော်တို့ အုပ်စု လူသာငယ်သေးတာ စာအုပ်ကို တန်ဖိုးထားရိုသေတတ်တာကို
စာကြည့် တိုက်က ၂ထပ်ဆောက်ထားပြီး စာကြည့် တိုက်က အပေါ်ထပ်။ အပြင်ကနေ လှေကားနဲ့ တက်ရတယ်။ အောက်ထပ်မှာကတော့ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ အပိုပစ္စည်းတွေသိမ်းထားတယ်
စာကြည့် တိုက်ထဲမှာတော့စာအုပ်တွေအပြင် အားကစားပစ္စည်းတွေလည်းသိမ်းထားသေးတယ်။
တခြားမှာ ထားဖို့ ရာနေရာမရှိလို့စာကြည့် တိုက်ထဲရောက်လာတဲ့ပင်ပေါင်ခုံကိုတော့တောတွင်းပျော်တို့အုပ်စုက သဘောအတွေ့ ဆုံး။
ဒီစာကြည့် တိုက်က စာအုပ်တော်တော်အမျိုးစုံအောင်ရှိတယ်။ အဘိဓာန် စွယ်စုံကျမ်းတွေဆိုရင် အဲဒီအချိန်က နောက်ဆုံးထုတ် အတွဲထိရှိတယ်။
ရွှေသွေး မိုးသောက်ပန်း ကာတွန်း သုတရတနာသိုက် စတဲ့ကလေးစာပေတွေကလည်း လုံလုံလောက်လောက်။
အမေရိကန် မြန်မာသံရုံးကထုတ်တဲ့ လင်းရောင်ခြည်စာအုပ်ကလည်း အပတ်စဉ်အတိုင်း။
သိပ္ပံမှူးတင်စာအုပ်တွေလည်း ဖတ်နေပြီး။ မဆလလမ်းစဉ်ဂျာနယ်လည်းမလွတ်။
မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် လမ်စဉ်ဂျာနယ်က သရုပ်ပျက်ယဉ်ကျေးမှုဂီတတွေကိုဝေဖန်တဲ့ကာတွန်းတွေကို သဘောအကျဆုံး။
စာပေဗိမ္မာန်ထုတ် ကျန်းမာရေး နိုင်ငံရေး ဘာသာရေးစာအုပ်တွေကလည်း စုံမှစုံ။
ဒီအချိန်ကတည်းက မွန်းမတည့် မှီ ၂ မိနစ် တို့လူသေလူဖြစ်တို့ တွေလည်း ဒီအရွယ်မှာဖတ်နေခဲ့ ကြရပြီ။ ဖတ်လို့ မပြီး တခြားဖတ်ချင်တာရှိရင်လည်း အိမ်ကိုယူသွား မပျက်မကွက်ပြန်ထားပေးခဲ့ ကြတာချည်းပဲ။
မှတ်မှတ်ရရ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်ရေးတဲ့ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်းတောင်တွေ့ သေးတယ်။
ဒါကြီးတော့မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တော့ ပါဘူး။
ကျောင်းဖွင့် နေတဲ့ ရက်တွေများဆို နေ့ လည်ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ကျောင်းသားတွေအပြည့် နဲ့ တော်တော်စည်တယ်ဗျ။
တောတွင်းပျော်အုပ်စုက စာကြည့် တိုက်ထဲ ရောက်သွားပြီးဆို တစ်ယောက်ယောက်က
စာတစ်ကြောင်းဖတ်ပြ ကျန်တဲ့ သူတွေကနားထောင် … ပြီးတော့ငြင်းခုံလေကန်ကြပေါ့ ။
ဒီမှာတင် တောတွင်းပျော်တို့ ရဲ့ ပါးစပ်မှာ
နာဇီ ပိုလန် ဟစ်တလာ ဥရောပ ဟီရိုရှီးမား အနုမြူဗုံး ပုလဲဆိပ်ကမ်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု
ဗီယက်နမ် အိုင်စတိုင်း စတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖောင်းပွနေလောက်အောင် ပြောနေတတ်ကြပြီ။
စာကြည့် တိုက်ထဲ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကမ္ဘာ့ မြေပုံကြီးရှေ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရှေ့ သွားပြီး ကစားကြတော့ 
တာ။ မြေပုံရှေ့ ကစားတယ်ဆိုတာက ဒီလိုပါ …
တစ်ယောက်က မြေပုံထဲက နိုင်ငံအမည် ဒါမှမဟုတ် မြို့ အမည် တစ်ခု စိတ်ထဲကမှတ်ပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေကို လိုက်ရှာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ရှာတွေ့ တဲ့ သူက ကျန်တဲ့ လူတွေကို ဆက်မေးပေါ့ ။
ဒီကစားနည်းက တော်တော်အကျိုးရှိတယ်။ ကစားနေတုန်းက စိတ်ဝင်တစား ရှာခဲ့ ဖွေခဲ့ ကြတော့ 
နောက်ပိုင်းတော်တော်နဲ့မမေ့ နိုင်တော့ ဘူး။ အဲဒီတုန်းကဆို မြန်မာပြည်ထဲက ရှိသမျှမြို့ ဟူသမျှ
ကျူရှင်တွေခေတ်မစားသေးတဲ့ငယ်ငယ်က စိတ်အဖိအစီးမရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားခဲ့ကြရတာတွေ ခုကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးမြင်မိလို့ရေးလိုက်မိတာပါ။
ခုခေတ် စာကြည့် တိုက်တွေက နာမည်ကြီး ဟိန်းနေသလောက်
ကျောင်းသားတွေဟာ … ..
မြစပဲရိုး says: တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ထဲ စာကြည့်တိုက် ဆိုတာ တွေ နယ်တွေ မှာလဲ ရှိပါတယ်။
အရီး အဖွားနေတဲ့ နယ်မြို့ လေးမှာ တောင် စာအုပ်မျိုးစုံ ရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးရှိတယ်။
မီးသတ်ရုံ နဲ့ တွဲ ထားတာ။
အသုံးမကျခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူများ ရဲ့ လက်ထဲ အားလုံး နိမ့်ကျ တာထက် ပို နိမ့်ကျသွားတာ။
သူကြီး ကို ကြိုပြောထားမယ်။ ဘာသာရေး နဲ့ မဆိုင်။
အဖွားတို့ အချိန်ကလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ မှာ အလှူအတန်းတွေ ပြည့်လို့။
အဲဒီတုန်း က လူတွေ စိတ်ဓာတ် ဒီနေ့လို အောက်တန်းကျ သူ မများဘူး။
တိုင်းပြည် ကို အုပ်ချုပ်သူများ ရဲ့ ဉာဏ်ပညာ ဆင်ခြင်တုံတရား စိတ်စေတနာများ ပေါ်မှာဘဲ တည်တယ်။
နိုင်ငံ တစ်ခု ကို သူတို့ ဝါဝါ နဲ့ ပြောင်းလဲ နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
အခုတော့ အဲဒီပါဝါ က သူတို့ ဘဝ တွေ ကို သီးသန့် မြှင့်ဖို့ သာ လုပ်ခဲ့ကြလို့။
ဘယ် ဘာသာရေး ဘုရားဟော နဲ့မှ မဆိုင်။
လူတွေ ရဲ့ အတ္တနဲ့သာဆိုင်ပါသည်။
တောတွင်းပျော် says: ကျနော်တို့ တုန်းက တောင်ပေါ်တောမြို့ လေးက ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်
တော်တော်စုံတယ်။ ဆရာတွေကလည်း စာဖတ်ဖို့အားပေးကြတယ်။
စာသင်ရက်နေ့ လည် ကျောင်းဆင်းချိန်ဆို စာကြည့် တိုက်မှာ ကျောင်းသား
ဒီဒေသက ဗမာစကားမပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါ။
kai says: စာကြည့်တိုက်ဆိုတဲ့.. ခေတ်ကုန်ပါပြီ..။
အဲဒီအဆောက်အဦတွေကို.. တခြားတနည်းနဲ့အသက်သွင်းသင့်တယ်..။ ဥပမာ.. ကွန်မြူနတီစင်တာ.. လူမှုရေးကူညီတဲ့.. အားကစားလုပ်တဲ့..နေရာမျိုးပေါ့..
( ဘာသာရေး.. လုံးဝမနွယ်သင့်)
လူငယ်တွေ ဘီယာ/လဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်.. ကရာအိုကေ..သွားဆိုရင်းလည်း.. အငြင်းအခုန်.. ဒီဘိတ်လုပ်တဲ့အခါ.. ဆဲလ်ဖုန်းလေးနဲ့.. အမှန်အချက်အလက်ကိုရှာဖွေတာမျိုးဖြစ်သင့်သလို.. အဲလိုအချက်အလက်..စာအုပ်တွေကိုလည်း.. အင်တာနက်ပေါ်ရောက်အောင်.. လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။
တောတွင်းပျော် says: စာကြည့် တိုက်ခေတ်ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ
သဂျီးပြောသလို စနစ်ကဖြိုသွားတာ ..
နဝတခေတ်မှာ ပြန်ကြားရေးဌာနဖွင့် တော့စာကြည့် တိုက်တွေဖွင့် ပါရဲ့ ။
သတင်းစာ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့သာမန် အချစ် သိုင်းဝတ္ထုတွေလောက်ပဲ
ဗဟုသုတရှာမှီးဖို့ ဆိုတာထက် အပန်းဖြေဖို့ လောက်ပဲအဆင့် ရှိအောင်
လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ဘီယာဆိုင်ထိုင် ဒီဘိတ် အငြင်းအခုန်လုပ်တဲ့ အခါ
ဖုန်းကနေ အချက်အလက်ရှာဖို့စာအုပ်တွေ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်လာမယ့် 
အဆင့် ကတော့တော်တော်လိုအုံးမယ်ထင်တယ်။
လောလောဆယ်တော့စာကြည့် တိုက်ကလေးပဲ အသက်ဆက်ရှင်ပါစေ။
Thint Aye Yeik says: စာကြည့်တိုက်တွေ ဆိုင်းဘုတ်ပဲ ရှိပြီး စာအုပ်မရှိ
ငှားရ ခက်နေတာ မြင်နေရ. . .
အိုဘယ့် စာပေလောက. . .
တောတွင်းပျော် says: ခု ကျနော်တို့ ရွာမှာ ငွေအကုန်တော်တော်ခံပြီး စာကြည့် တိုက်ဆောက်ကြတယ်။
စာကြည့် တိုက်ကလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့်စာအုပ်တစ်အုပ်မှ မရှိသေး။
ဟန်ပြပဲဖြစ်သွားမလား .. ကျနော်တို့ ဆီမှာက ကလေးတွေကို
စာဖတ်ချင်လာအောင် တိုက်တွန်းအားပေးမယ့် သူမရှိဘူး။
ကျနော်ငယ်ငယ်က သဘောကျတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကို အစ်ကိုဝမ်းကွဲကို
ပြမိတော့သူက ကျနော်ကိုပြန်ပြောတာက
ဒီအချိန်မှာ အဲဒီပိုက်ဆံအိတ်သစ်တစ်လုံးရှိဖို့ ထက် အထဲမှာနေမယ့်ပိုက်ဆံရှိဖို့ က
ဦးကြောင်ကြီး says: ဆာကြည့်ခိုက်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မျှစ်ကြော်ကတော့ စာအုပ်ကို လက်ကပဲ ကိုင်ဖတ်ချင်တယ်။ ဟိုဟာ ဒီဟာတွေနဲ့ မဖတ်တတ်ဘူး။ ဦးနှောက်ထဲ စီးဆင်းသွားတဲ့ ရသ မတူဘူး
တောတွင်းပျော် says: ဟုတ်ပါတယ် ဆရာမ။
ကျနော်လည်း စာအုပ်ကိုင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ရတာကို
အောင် မိုးသူ says: သူဂျီး ပြောသလို ကွန်မြူနတီပေါ့နော်…… ဒါမယ့် စာကြည့်တိုက်ဆိုတာကိုပဲ မက်မောမိတယ်။
တောတွင်းပျော် says: စာကြည့် တိုက်တွေကိုတော့မရောက်နိုင်ခဲ့ တော့ ဘူး ကိုမိုးသူ။
ဒါပေမယ့်စာအုပ်ရောင်းတဲ့စာအုပ်တိုက်တွေရောက်ရင်
စာအုပ်အစုံစုံကိုကြည့် ပြီး ရင်ခုန်နေရတုန်း။
ကိုယ်လိုချင်သမျှ ဝယ်ဖို့ ကလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။
ဒီတော့ဟိုတုန်းက အခမဲ့ဖတ်ချင်သလောက်ဖတ်ခဲ့ ရတဲ့ 
စာကြည့် တိုက်တွေကို လွမ်းမိသား ..
မမချွိ says: ဖတ်ရတာကို ကြည်နူးစရာ။
တောတွင်းပျော် says: ဒီစာပုဒ်လေးကို ရေးနေချိန်မှာ
ငယ်ငယ်ကလေးဘဝက သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ယောင်မိပြီးတော့ 
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသတွေ ရောက်ကုန်နေပြီလည်းမသိ။
ခုနေ လမ်းမှာ မတော်တဆ ဆုံတွေ့ မိခဲ့ ရင်တောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
မှတ်မိကြတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး။
ပြန်တွေ့ လို့မှတ်မိနေကြအုံးမယ်ဆိုလည်း ..
အမြင်မတူ ဝါဒမတူ ရန်သူတွေလိုဖြစ်ချင် ဖြစ်နေကြတော့ မှာ
ဒါပေမယ့် လည်း ငယ်သူငယ်ချင်းဟာ ငယ်သူငယ်ချင်းပါပဲ။
kai says: ဒီကိစ္စသေသေချာချာဆွေးနွေးချင်တယ်..။
ပြောရရင် မြန်မာတွေ.. ကွန်မြူနတီစိတ်ဓတ်မရှိ.. အလေ့အကျင့်မရှိတာက စရမယ်..။
ထစ်ဆို.. ဘာသာရေးသွားသွားနွယ်တော့.. ဟိုက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က.. အသုံးမကျရင်မကျသလောက်.. နိမ့်ကုန်ရော…။
အခု.. လုပ်လာကြတဲ့.. ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေများလာတာမျိုး.. အဲဒီအဖွဲ့တွေနားနေရာအတွက် စာကြည့်တိုက်က အသုံးတော်ခံတာမျိုးဖက် ရွေ့ယူသွားနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. စာကြည့်တိုက်တွေ တော်တော်ပြုတ်ကုန်ပြီ..။
စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေလည်း ပြုတ်ကုန်ပြီ..။ အမေရိကားက… စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေဆိုတာ.. စာကြည့်တိုက်တပိုင်းပါ..။
ကျုပ်ယူအက်စ်ရောက်ခါစ.. စာအုပ်တွေအလကားသွားသွားဖတ်တာ.. အဲဒီစာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာပေါ့..။
မြန်မာပြည်မယ်.. နောင်ရေးမကောင်းတာကို.. တွန်းလုပ်မယ့်အစား.. သေချာတဲ့ဖက်ကို မသိမသာ..ရွေ့ယူသင့်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ..။
သဘောက.. စာကြည့်တိုက်မှာ.. အင်တာနက်ဖရီးပေးနိုင်တာမျိုးပေါ့..။
ဖဘ ပေးမတက်ပဲ.. စာဖတ်ဖို့အတွက်ပဲဖွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့..။
ဒါမှမဟုတ်.. မင်ဘာကြေးပေးရင်.. အင်တာနက်.. အကန့်အသတ်နဲ့ ပေးသုံးတာမျိုး..။
တောတွင်းပျော် says: သဂျီးပြောသလို စာကြည့် တိုက်တွေကတော့ကျဆုံးနေပါပြီ။
နဝတခေတ်က သတင်းစာတွေထိပ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
စာကြည့် တိုက်တွေ ဘယ်နှစ်လုံးဖွင့် ပြီးပါပြီ ကြွားနေရတာအမော။
အောင်မြင်ပါတယ်လို့ဘယ်သူကမှ မပြောခဲ့ ကြပါဘူး။
သဂျီးပြောတဲ့ ကွန်မြူနတီ အလေ့ အကျင့် က စာသင်ကျောင်းတွေကနေစပြီး
လေ့ ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရမယ်ထင်တယ်။
ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ စရိုက်လုံးဝမတူတဲ့လူမျိုးကြီး ၃ ခု အိန္ဒိယ တရုတ် မလေး အစရှိတဲ့မလေးရှားက စာသင်ကျောင်းတွေကနေ ဒီပုံစံတွေနဲ့လေ့ ကျင့် ပေးနေတာ
တွေ့ ရတယ်။ စုပေါင်း အသင်းအဖွဲ့ ပုံစံ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ကလေးတွေကို လေ့ ကျင့် ပေးတာတွေ့ ရတယ်။
၅ တန်း ၆ တန်းအရွယ် ကျောင်းသားတွေ ခေါင်းဆောင်ကျောင်းသားရဲ့အမိန့် အတိုင်း စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ချီတက်လေ့ ကျင့် ခန်းတွေ လေ့ ကျင့် ရာမှာ ကပျက်ကချော်မဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျလေ့ ကျင့် နေတာတွေ တွေ့ ဖူးတယ်။ ဆရာ ဆရာမတွေ
အနီးကပ်ကြီးကြပ်တာတွေ လုံးဝမရှိဘဲ သူတို့ ဘာသာထိန်းသိမ်းသွားတာ။
နောက်ပြီး ဘောလုံး ဘော်လီဘော ဘတ်စကက်ဘောစတဲ့စုပေါင်းကစားရတဲ့ 
ဒါကြောင့် လည်းထင်တယ်။ စုပေါင်းအသင်းအဖွဲ့ ပုံစံ လုပ်ဆောင်တတ်ကြတဲ့စနစ်ကြောင့်လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေ မရှိသလောက်နည်းတာ။
လုံးဝမရှိခဲ့ တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၇၀ လွန်နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်မလေး အရေးအခင်းတွေရှိခဲ့ ပေမယ့်ဒီအချိန်မှာတော့တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကျေအေး နားလည်
ဒါက သဂျီးပြောတဲ့ကွန်မြူနတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော့ အမြင်ပါ။
လူတွေ ပိုပြီးစာဖတ်လာကြဖို့တွန်းအားအပိုင်းကတော့ကျနော်ဝင်ရောက်
ဒီရွာထဲက နိုင်ငံတကာအတွေ့ အကြုံ စာကြည့် တိုက်အတွေ့ အကြုံရှိတဲ့ လူတွေက
လောလောလတ်လတ် စာကြည့် တိုက်ဖွင့် ပွဲ အတွေ့ အကြုံရှိတဲ့ အန်တီ ပဒုမ္မာတို့ 
လည်း သူဂျီးနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ကျနော်တို့ အတွက် အတွေ့ အကြုံ ဗဟုသုတတွေရ ရတာပေါ့ ။